Betty G'n tarree weellistoota dubaraa ciccimoo Afrikaa bara kanaa keessa galte - BBC News Afaan Oromoo
Betty G'n tarree weellistoota dubaraa ciccimoo Afrikaa bara kanaa keessa galte
22 Amajjii 2020
Image copyright Betty G
Goodayyaa suuraa Betty G
Biruktaayit Geetaahun maqaa waltajjiidhaan ammoo 'Betty G' jedhamuun kan beekamtuufi sirbota isheen jaallatamummaa guddaa horachaa dhufte gama dubartootaan weellisituu cimtuu Afrikaa bara kanaa keessatti filatamteetti.
Betty G'n Osloo, Noorweyitti sirna badhaasa Noobeelii Nagaa ministiri muummee Abiy Ahimad irratti argamuun sirba dhiyeessuun ishee ni yaadatama.
Tibbana dhaabbatni 'Sound City MVP' jedhamu teessoon isaa Naayijeeriyaa magaalaa Leeegoos tahe namoota gama ispoortii fi aartiin dhiibbaa uuman badhaasuu fi filachuun beekamu bara kanas gama dubartootaan weellistoota cicimoo Afrikaa gama dubartootaan adda baasuun kaadhimee ture.
Isaan keessaa 'Betty G' ykn Biruktaayit Geetahun Itoophiyaa irraa artistoota kaadhimaman keessatti argamti.
Isaan kaan ammoo Afrikaa Kibbaa, Tanzaaniyaa, Kaameeruuniifi Naayijeeriyaa irraati kan dhaabata kanaan kaadhimamanii turan.
Dhaabbatichi mo'attota qofa osoo hin taane namoota hojii aartii isaaniin bara kana keessa dhiibbaa uumaniiru jedhedha kan adda baasuun kaadhimu.
Itoophiyaa irraa 'Betty G'n' kan kaadhimamtee turte yoo tahu carraa kana argadhee badhaasota gurguddaa akkasiif kaadhimamuun koo waan guddaadha jetti.
Ulaagaa maaliin akka na filatan hin beeku kan jettu Biruktaayit [Betty G] sirban bara kana baase galchuun qaba ture amma garuu bilbilumaan akkan kaadhimamee jiru natti himan malee ulaagaa isaanii hin barre jette.
Haatahu malee, sirban ani badhaasa Noobelii Nagaa irratti sirbe sun akkan kaadhimamuuf na gargaareera jedheen yaada jetti.
Erga Oslootii deebitees Betty G'n namoota biroo lama waliin tahuun sirba qeenxee 'Selam' jedhu hojjetteetti.
Tiraamp badhaasa Noobeelii naaf malu nama biraatti kennan jedhan
Artistootni Itoophiyaa wal-tatjjii badhaasa gurguddaa Afrikaa irratti yeroo kaadhimaman ykn badhaafaman arguun waan amaleeffatame miti.
Kanaaf jetti Biruktaayit ''Kun Itoophiyaaf waan guddaadha jedheen amana. Sababni isaas Afrikaa keessatti kan keenyas gara kan isaaniitti; kan isaaniis gara keenyatti fidnee dhaggeeffatmummaa keenya guddisaa hin turre.''
Sirna badhaasa Noobelii nagaa MM Abiy Ahmad irratti sirba 'sin jaalladha' jedhu kan weelliste Birkutaayit ykn 'Betty G' ergasii as wal-tajjii hedduu irratti akka afeeramtee fi jaallatamummaa ishees dabale himte.
Badhaasa weellistuu cimtuu Afrikaa bara kanaa jedhamuun Sound City MVP kaadhime keessatti Naayijeeriyaa irraa dubartootni sadii filatamaniiru.
Sirbootni Naayijeeriya hedduun adunyaa guutuutti waan dhaggeeffatamaniif amma Hooliwud iyyuu galuu danda'eera jetti Biruktaayit. Akkuma isaaniitti guutuu adunyaatti dhaggeeffatamuuf osoo hojjenne beekamtii guddaa horachuu fi aartii biyya keenyaa beeksisuun ni danda'ama jetti.
'Betty G' fi muuziqaa
Biruktaayit aalbema ishee jalqabaa bara 2015 'Manew Fitsum?' jedhu kan hojjettee gabaa irra oolchite yoo tahu isa 2ffaa jaalatamummaa guddaa horate 'Wegegtaa' jedhu ammoo bara 2018 keessa hojjette.
Kanaanis badhaasota garaagaraa mo'ateetti. Biruktaayit ijoollummaa ishee irraa eegaltee sirboota biyya keessaa fi alaa baay'inaan dhaggeeffachaa waanan guddadheef lamaan isaanii iyyuu wal makaniiti kan na keessa jiru jetti.
Kanaaf sirbootni koo eenyummmaan ani ittiin guddadhe keessaa kan dhufan malee muuziqaa Itoophiyaa ammayyeessuf jecha qofa kan hojjetaman miti jetti.
Biruktaayit afaanota garaagaraa kan akka Ingiliffaa, Faransaayii fi kaaninis weellisuu akka dandeessutu himama.
Biruktaayit adunyaa irratti sirba baasuu qofa osoo hin taane wal deeggaruun [Collaboration] muuziqaa garaagaraa arstitoota biyyoota garaagaraa waliin hojjechuun ni ilaalama jetti.
Goodayyaa suuraa Sirna Badhaasa Noobelii Nagaa Oslootti, 2019
Kanaaf amma artistoota biyyoota garaagaraa kan akka Kaameerun fa'a irraas hojjechaa akka jirtu himti.
Haa tahu malee rakkoon nu mudatu artistootni bebbekamoon adunyaa keenyaa hedduun nu hin beekan jetti. Amma yeroo gabaabaan as na baraa jiru kan jettu Betty G'n itti dhiyaannee wal deeggaruun hojjechuuf gahumsa keenya itti agarsiisuu qabna jetti.
All Africa Music Awards [AFRIMA] sirni badhaasaa jedhamu bara 2014 keessa deeggarsa Gamtaa Afrikaan hundaa'e.
Kunis artistoota hojii muuziqaan jajjabeessuu fi badhaasuu, namoota kennaa kalaqaa fi dandeettii addaa qabanis badhaasu ture. Birukaayitis badhaasa koreen kun kennu mo'achuu dandeesseetti.
Mo'ataan Noobelii MM Abiy Baha Afrikaatti dhuguma nagaa buusaniiruu?
Bara 2018 keessa aalbemni Betty G' akka Afrikaatti aalbema bareedaa [Album of the Year] jedhamuun filatameera.
Artistii cimtuu Afrikaa [Artist of the Year] kan jedhuufis kaadhimamtuu turte. Garuu badhaasicha hin mo'anne ture. Dabalataan dubartootaan artistii cimtuu Afrikaa Bahaa [Best Female Artist in Eastern Africa]tahuun filatamteetti.
Bara kana ammoo erga Oslootti sirna badhaasa Noobelii Nagaa MM Abiy Ahmad fudhatan irratti weellistee maqaan ishee bal'inaan beekamaa dhufeera.
Isheenis sirnicha irratti argamuun koo carraa guddaa naaf kenneera jette.
Betty G amma albama haaraa hojjettee xumuraa akka jirtu BBCtti himteetti. Biruktaayit Getaahun Taaddasa Urgaa Gaarii maatii Dajjaasmaach Gabremaariyam gaarii keessaa akka taate kanaan dura BBCtti himtee ture.
Weellistuu 'Betty G.: 'Walleen Sin Jaaladha caalaatti Itoophiyaa beeksisuu danda'a jedheen filadhe'
Donaald Tiraamp: 'Biyyattii waraana irraa oolchine... gaggeessaan isheemmoo Noobelii badhaafame'
10 Amajjii 2020
Badhaasa Noobelii Nagaa 2019: MM Abiy Ahimad (PhD) Baha Afrikaatti dhuguma nagaa buusaniiruu?
Qondaaltonni TPLF 'Isaayyaas dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuu' balaaleeffatan
Barataa yuunivarsiitii, zayita motoraafi kalaqawwan biroo 20 ol kalaqe
Yuuniversitiin Miizaan Teeppii barattoonni gara maatiisaaniitti akka galan murteesse
Danqaa haaraa waliigaltee Sudaan Kibbaa mudate
Daa'imman maaliif baay'inaan koronaavaayirasiin hin qabaman?
Haleellaa Kaameeroon keessatti raawwateen namoonni 22 du'an
Hong Kong keessatti hanni sooftii akkaan hammaateera, maaliif?
Waggaa 2ffaan MM duraanii aangoo gadi dhiisan yoo yaadatamu